Umbhali? Izindlela Ezi-7 Ezinamandla Zokwenza Incwadi Yakho I-Bestseller Yomhlaba Wonke | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 23, 2018 USanket Patel
Akungabazeki ukuthi, uma ungumlobi ofisayo, ngesikhathi esithile somsebenzi wakho kufanele ngabe ubuze lo mbuzo, Ungayenza kanjani incwadi yami ibe ngumthengisi othengisa kakhulu? kumshicileli noma omunye umbhali othengisa kakhulu. Ngakwesokudla? Yebo, ukuba ngumbhali, uma ufuna ukuthengisa izincwadi zakho kwinani labafundi elingenzeka futhi waziswe yizo-ke kunengqondo impela! Kusobala ukuthi ukuphenduka okunjalo emsebenzini wakho kungakuvumela uzakhele idumela ngendlela engakaze ibonwe ngaphambili.
Ngakho-ke, uma ufuna izwi lakho lizwakale lapho-ke kuzodingeka uthathe igxathu elisebenzayo nelikhethekile. Impela awukwazi ukuguqula inoveli ibe ngumthengisi othengisa kakhulu uma ingabhalwanga kahle. Kepha, ngaphandle kokubheka iqiniso lokubhala ngesitayela esihle, kufanele unakekele ezinye izinto ukwenza ibhuku lakho lithengise kakhulu.
Ufuna ukwazi izimfihlo zokwenza kanjalo? Bese, nazi izindlela eziyisithupha lapho uzokwazi ukwenza incwadi yakho ibe yinkulumo enkulu kunazo zonke edolobheni. Vele ufunde ngaphambili futhi ngikholelwa ngobuqotho ukuthi lawa macebiso azokusebenzela!
Yenza okuthile okukholwayo - Uma unombono ebuchosheni bakho ukuthi isihloko esingakhanga ngokwanele esixukwini singenza incwadi yakho ibe ngumthengisi othengisa kakhulu ngakho-ke wena unephutha ngokuphelele. Esikhundleni salokho, bhala kulezi zihloko othola ukuthi zithakazelisa futhi ufuna ukufunda ngazo. Njengoba uCarol Shields asho ngokufanele, 'Bhala incwadi ofuna ukuyifunda, leyo ongayitholi'. Ngakho-ke, yize ubhala incwadi eyindida ngesitayela esijwayelekile uma ubhala indaba ebaluleke kuwe kukhona ithuba elikhulu lokuthi ibe yithengisa kakhulu.
Khetha itimu elungile - Esinye sezici ezinhle kakhulu ezingavumela inoveli ukuthi ivelele kokunye ingqikithi yayo. Abafundi bakho bangancoma incwadi yakho kwabanye kuphela lapho bekwazi ukufana ngokufanayo. Futhi, babhekisa incwadi komunye umuntu lapho bethola ukuthi incwadi idlulisa umyalezo abanye okudingeka bawufunde. Ngakho-ke, kufanele utshale isikhathi sakho esiyigugu namandla ukuthola isihloko esifanele senoveli yakho.
Vumela ithoni ingathathi hlangothi - Uma isiqubulo sakho ukwenza ukuthi incwadi yakho ibonakale emhlabeni wonke kufanele ubhale ngendlela engaxhuma kubo bonke abafundi. Kodwa, linda! Ngalesi sitatimende sami, angisho ukuthi indaba yakho kufanele isuselwe esikweni lomhlaba wonke kuphela. Ungabhala kahle kakhulu indaba ngento esondele enhliziyweni yakho, njengesizwe sakho, isiko noma yini! Vele uqiniseke ukuthi izingxoxo, ukulandisa, isitayela sokubhala njll ziyaqondakala izethameli ezikhona emhlabeni wonke. Uyamkhumbula uMnqobi Wombhuki Wencwadi Ka-2015- Umlando Omfushane Wokubulawa Kwezikhombisa? Yebo, ngikhuluma ngohlobo olunjalo lwethoni.
Yakha 'Ikhava Yencwadi' yakho ngokuhlukile - Kungenzeka sikholwe esitatimendeni esithi 'Musa ukwahlulela incwadi ngekhava yayo' iminyaka. Kepha, empeleni, ukubukeka kwangaphandle kwencwadi kuvame ukuletha yonke indaba ngendlela elula ebhalwe ngaphakathi. Ngakho-ke, ukunikeza incwadi yakho ukubukeka okunomusa kuhlose ukuba yinto ebaluleke kakhulu. Kepha, ungacabangi ukuthi udinga ukukhipha inani elikhulu lemali ngokwenza lokhu! Konke okudingayo ngumklami wezobuciko oyingcweti yokwenza imibono iphile ngokwesembozo sencwadi esezingeni eliphezulu.
Khetha umshicileli ophelele - Uma kuziwa ekuguquleni incwadi ibe yithengisa kakhulu umshicileli udlala enye yezindima 'ezibaluleke kakhulu'. Ukwethembeka komkhiqizo komshicileli omkhethelayo kuzothinta ukuthembeka kwebhuku lakho ngendlela enkulu. Ngakho-ke, ungakhohlwa ukukhetha umshicileli onjalo angavumela igrafu yokuthengisa kwencwadi yakho iye phezulu !!
Dala ikhasi lombhali kanye nephrofayili yencwadi ku-'Goodreads ' - Uma kukhulunywa ngabathandi bezincwadi i-Goodreads yigama elihayizayo !! Ngakho-ke, uma ufuna ukuvumela ukuthi izincwadi zakho zithengiswe kahle kufanele ngabe uzenza zibonakale kubabukeli abakhona emhlabeni wonke. Futhi, i-Goodreads iyindlela engcono yokwenza kanjalo! Uma usuqedile ngokwenza i-akhawunti ku-'Goodreads ', cela abangani bakho, abalandeli bakho kanye nabafundi ukuba bashiye isibuyekezo esakhiweni futhi bagcine kodwa hhayi okungenani bakuncoma kwabanye abasebenzisi bale webhusayithi.
Sebenzisa izinkundla zokuxhumana ukukhangisa - Kulezi zinsuku, abantu basebenzisa iningi lesikhathi sabo samahhala ngenkathi beku-inthanethi kumanethiwekhi ahlukahlukene wezokuxhumana njenge-Facebook, Twitter, Instagram njll. Ngakho-ke, uma ufuna ukushiya umbono oqinile wencwadi yakho emhlabeni bese usebenzisa lezi zingxenyekazi ukumaketha incwadi yakho obekungakhulisa ukuqwashisa kwakho nokwaziswa kwakho. Ufuna ukwazi ukuthi kanjani? Kulula futhi kulula! Ukwakha ama-trailer ezincwadi, ukwabelana ngezingcaphuno zencwadi, ukudweba ama-doodle ezincwadi kungakwenzela izimangaliso.
Ngaphandle kwala maqiniso ashiwo ngenhla, kufanele ugcine ezinye izinto ezahlukahlukene engqondweni yakho uma ufuna ukwenza incwadi yakho ithengise kakhulu. Njengokuhlela, ukuhlela nokuhlela kabusha ibhuku lakho kaninginingi, ukushicilela ukuhumusha, nokuba newebhusayithi yombhali, ukuthumela ama-imeyili kubabhalisile bakho, ukubhala isifinyezo sencwadi esicindezelayo njll kungakusiza ukuthi ungabi nalutho ngaphandle kokuthengisa kakhulu. Ngakho-ke, ungabe usalinda! Vele uthathe lawa macebiso, qhubeka, ubhale futhi wenze okuthengiswa kakhulu kakhulu emhlabeni kwakho maduze.
Tags: okuhamba phambiliokuhamba phambiliibhukuubuciko bezincwadiisembozo sencwadiukukhushulwa kwencwadiama-goodreadsPublishingukukhushulwa komphakathiukubhala incwadi
USanket Patel unguMsunguli noMqondisi we IBlurbpoint Media, i-SEO, nenkampani yezentengiso yedijithali. Intshisekelo yakhe yokusiza abantu kuzo zonke izici zokumaketha oku-inthanethi igeleza emkhakheni wezobuchwepheshe awunikezayo. Unguchwepheshe kwezokumakethwa kweWebhu, i-Search Engine Optimization, i-Social Media, i-Affiliate Marketing, i-B2B Marketing, i-Online Advertisement ye-Google, i-Yahoo ne-MSN.